ကိုဟန်ထွန်းရဲ့ မြန်မာဂီတစုစည်းမှု နောက်တစ်ခု
ကျနော်အင်တာနက်ပေါ် လျှောက်လည်ရင်းက၊ ကိုဟန်ထွန်းရဲ့ ဖန်တီးမှု နောက်တစ်ခု ထပ်တွေ့ပါသဗျာ။ မိတ်ဆွေတွေကို ဝေငှချင်ပါရဲ့။ ကိုဟန်ထွန်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ ဗျာ။ ယခုလိုကြံဖန်ပြီး တင်ဆက်ပေးနေ တာကို။ ပရိသတ်တွေ ရှိပါသဗျာ။
Posted by Yaw Han Aung at 1:31 AM
KATN, very nice. I like the variety on this blog. SKP